Eyga yar ee adhijirka ah ee Jarmalku dhab ma yahay? - Taranka
Dhaqdhaqaaq, feejignaan iyo sharaf leh, Shepherd-ga yar ee Jarmalku waa mid caqli badan, daacad ah oo geesinimo leh! Noocan moodada ah iyo kan casriga ah wuxuu isku daraa dhammaan astaamaha aad ka jeceshahay Adhijirka Jarmalka oo ku jira xirmo yar oo ka maamul badan.
Miyay tani u egtahay xirmo yar oo la jeclaan karo oo aad jeclaan lahayd inaad gurigaaga ku haysato? Sii wad aqrinta si aad wax badan uga ogaato waxa ufiican iyo qasaarooyinka yar yar ee Jarmalka Shepherd.
Waa maxay eeyga yar ee adhijirka Jarmalka ah?
Muxuu u eg yahay Adhijirka Jarmal ee Yaryar?
Adhijirka Jarmal ee Yaryar ma eey reer wanaagsan ah baa?
Lahaanshaha iyo daryeelka Daryeelaha Jarmalka Yar
Dareenka caafimaad ee Shepherd Jarmal yar
Waa immisa yar yar oo ah Adhijirka Jarmalka ah?
Noocyo ey kale oo u eg adhijir Jarmal yar
Adhijirka Yaryar ee Jarmalka ma kuu habboon yahay adiga?
Eyga yar ee adhijirka yar ee jarmalka ah ee yar yar ee casriga ah waxaa lagu abuuray taranka adhijirka weyn ee jarmalka leh Terriers-yada yaryar, Poodles, Collies Border ama noocyada kale ee yaryar ee xoola dhaqatada ah.
Sifooyinka waalidka kale waxay caadi ahaan u horseedaan eey ka yar kan Shepherd Jarmal oo cabbirkiisu sarreeyo oo dabeecaddiisu yara fududahay.
Ma cadda markii ugu horeysay ee German Shepherd la abuuray, laakiin waxa iska cad ayaa ah in dad badani ay u maleynayaan in Adhijirka Jarmalka uu aad ugu weyn yahay gurigooda.
Taas oo horseeday abuurista isla wadista shaqada sida Adhijirka Jarmalka ah , laakiin ku jira xirmo aad u kooban oo kafiican nolol maalmeedka isla markaana fudud in la daryeelo.
Eeyahaani waxaa badanaa lagu jahwareeraa adhijirrada kale ee yaryar iyo kuwa isku dhafan, sida Adhijirka Ustaraaliya iyo Shepherd yar oo Mareykan ah .
Iyada oo qayb weyn oo ka mid ah shakhsiyaadka yar yar ee German Shepherd shakhsiyadeed iyo astaamaha ka imanaya waalidkood reer Jarmal Shepherd, waxaa lagama maarmaan ah in si dhow loogu fiirsado tarankaan haddii aad rabto inaad si fiican u fahamto nooca yar.
Gorgortanka Jarmal ee Yaryar iyo Jarmalka Shepherd
Fiirfiican Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka (GSD) asalkiisu waa Jarmalka. Taariikhdooda waxay soo bilaabatay 1899 markii Kabtan Max von Stephanitz iyaga ku beertay inay ka shaqeeyaan beeraha , marka laga reebo shaqooyinka militariga iyo booliska.
Kuwani eeyo awood u eg yeey-sida ayaa kasbaday magac ah in ay yihiin-a-all-xirfadaha. Waxay ku fiicnaadeen ilaalinta iyo howlaha baaritaanka mukhaadaraadka. Waxaa sidoo kale loo tababbari karaa raadinta iyo samatabbixinta, ama caawinta naafada ama indhoolayaasha.
Heerarka cabbirka 'GSDs' waxay leeyihiin dherer ah 22 illaa 26 inji (56 illaa 66 cm), culeyskiisuna waa 50 illaa 90 rodol (23 illaa 41 kg).
Xaqiiq madadaalo: The Mini German Shepherd wuxuu ka duwan yahay Shepherds German with dwarfism - xaalad hidde ah oo aan ku dhicin eeyaha.
In kasta oo Shepherd Mini Jarmal ah uu qaadan doono astaamo badan oo la mid ah kan Shepherd-ka Jarmalka ah, haddana waxay ka tarjumi karaan qaar ka mid ah astaamaha waalidkood kale.
Laakiin guud ahaan, Adhijirka yar ee Jarmalku waxay u eg tahay inuu leeyahay isla jidh muruq ah, lugaha awoodda badan, iyo madax ballaadhan oo ballaadhan sida nooca weyn ee noocyadan.
Sidoo kale waxay yeelan doonaan indho u eg yicib u eg bunni, iyo sidoo kale dhego kacsan, dhego kacsan.
Fiiri fiidiyowgan oo ah Shepherd Ghadafi yar oo Jarmal ah oo sariirta ku sita milkiileheeda:
Intee ayey le'eg yihiin adhijirrada Jarmalka yar yar?
Mini Jarmal Shepherd oo buuxa ayaa hareeraha istaagi doona 15 illaa 20 inji (38 ilaa 50 cm) oo dherer ah oo aan ka miisaan badnaan doonin kudhowaad 50 rodol . (22.5 kg).
In kastoo ay yaryihiin, haddana macnaheedu maahan inay yihiin kuwo jeebkoodu le’eg yahay. Xaqiiqdii, waxaa loo kala saaray inay yihiin kuwo yaryar ama dhexdhexaad ah.
Intaas marka la dhaho, fido-kani uma baahna daarad weyn oo gadaal ah iyo waxay si fiican ula qabsan karaan deegaanno badan , taasoo ka dhigaysa mid ku habboon nolosha magaalada.
Ey leh jaakad qurux badan oo qurux badan
Koofiyaddiisa waxaa saameyn weyn ku yeelan kara waalidkeed kale, laakiin iyagu sida caadiga ah waxay leeyihiin dhogor dhumuc iyo laba-lakab ah oo dherer dhexdhexaad ah .
Qaabkeeda iyo midabkeeduba way kala duwanaan karaan. Waxay noqon kartaa mid la mid ah Poodle, oo u eg sida Terrier, ama silky oo toosan sida Collie.
Waxaa laga heli karaa hooska caadiga ah ee madow iyo tan madow ee Adhijirka Jarmalka, ama xitaa waxaad ka heli kartaa noocyadan casaanka, madow, caddaan ama lacag.
Isku darka Shepherd Chihuahua ee Jarmalka waa hal tusaale:
La kulan Smudge, isku darka adhijirka Jarmalka Chihuahua - Isha sawirka
Mini GSDs caadi ahaan waxay leeyihiin dabeecad la mid ah kan Shepherd Jarmal ee caadiga ah. Waa saaxiibo fantastik ah iyo xayawaan aad u fiican qoysaska.
La kulan Navie, Adhijirka Jarmal ee Yaryar - Isha sawirka
Iyagu way ku garab istaagi doonaan oo waxay si xoog leh u ilaalin doonaan qoyskaaga, iyagoo isla markaa u muujinaya jacayl fara badan carruurtaada.
Marka lagu daro xirmo aad u jilicsan oo xoogaa ka nasan, waxay sidoo kale caqli iyo fududdahay in la tababaro.
Gaar ahaan marka Adhijirka reer Jarmal ee dadaalka badan leh lagu barbaariyo a Soohdinta Collie ama Poodle , Kuwaas oo caan ku ah garaad sarre.
Xeeldheerida 'Shepherd German' Shepherd sidoo kale waxay soo bandhigtaa xirfado badan oo la mid ah waalidkood.
Maaddaama ay leeyihiin isku mid ahaansho, waxay sidoo kale badanaa loo isticmaalaa ujeedooyin xoolo dhaqasho ama waxaa loo tababaran karaa adeeg iyo shaqo millatari.
In kasta oo ay noqon karaan kuwo la carbin karo, MiniGerman Shepherd ayaa leh wado xoog leh oo la ugaadhsado wuxuuna ubaahan doonaa isdhexgal hore, qaasatan xayawaannada kale ee qoyska sida bisadaha. Ku guuldareysiga inaad sidaas sameyso waxay u horseedi kartaa eeygaaga ugaarsashada iyo cayrsashada xayawaanka yaryar ee guriga ama jardiinada.
Waa wax fiican inay si fiican uga jawaabaan xoojinta togan. Xitaa waxay sameystaan ​​eey weyn oo waardiye ah inkasta oo ay cabirkoodu sarreeyaan
Si kastaba ha noqotee, iska hubi inaadan uga tagin Adhijirkaaga Yaryar ee Jarmalka kaligiis muddo dheer iyada oo noocan xiisaha leh-ee-fadlan uu ku dhici karo walaac kala soocid ah.
Noocan khaaska ah hubaal maaha sida dayactirka sare sida qaar ka mid ah Shepherd kale oo Jarmal ahi halkaas uga gudbaan.
Cabbirkooda yar wuxuu ka dhigan yahay Mini Shepherds uma baahna ku dhowaad jimicsi sida waalidkood oo buuxa, guud ahaan waxay ku nool yihiin waqti dheer waxayna ka caafimaad badan yihiin aabbaha waalidkood, sidoo kalena kuma cuni doonaan guriga iyo guriga.
Ey yar oo damac weyn leh
In kasta oo laga yaabo inayan u baahnayn cunto aad u badan sida Adhijirka Jarmalka weyn, noocyada yaryar ayaa ah wali firfircoon oo sidaas awgeed waxay u baahan tahay kibble tayo wanaagsan leh oo leh borotiin aad u wanaagsan lagana doorbido hadhuudh la'aan.
Eeyahaani waxay u baahan doonaan hareeraha 1500 oo kaloori maalintii ama qiyaastii 3 koob oo kibble maalinle ah . U kala qaybi laba cunto si aad si habboon ugu ilaaliso heerarka tamarta eeygaaga maalinta oo dhan.
Wanaagsan fitamiin dheeri ah sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo lafahooda iyo muruqyadooda xoog iyo caafimaad.
Adhijirka yar ee Jarmalka ayaa jecel inuu ciyaaro
Sida eey kasta, kaniinkan firfircoon wuxuu u baahan yahay kicinta jirka iyo maskaxda. Waxay doorbidaan inay mashquul noqdaan hadday tahay shaqo, ciyaaro kala duwan, iyo caqabadaha xirfadeed marka laga reebo socodka caadiga ah ee maalinlaha ah.
Adhijirro Jarmal ah oo yar-yar u baahan tahay ilaa 60 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii .
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso inaad ku qorto saaxiibkaaga dhogorta ah fasalada qaarkood ama nashaadaad dheeri ah sida firfircoonida ama isu soo baxyada shaqada si ay gacan uga geystaan ​​soo saarista dareenkooda xoola dhaqashada.
Kaliya maahan kani inuu noqon doono qaab jimicsi cajiib ah eeygaaga, laakiin sidoo kale wuxuu ku ilaalin doonaa ugaarsiga Mini German Shepherd iyo ciyaar wadayaasha qanacsan!
Adhijirka Jarmalka ah ama Jarmal Jarmal ah?
Adhijirka Jarmalka ayaa mararka qaarkood lagu naanaysaa Daadinta Jarmalka maadaama lagu yaqaan inay timahooda uga tagaan gurigaaga oo dhan.
Nasiib darrose, Adhijirka Jarmalka ee Yaryar kama duwana oo waxay u badan tahay inay daadinayaan sannadka oo dhan. Xitaa intaa ka sii badan inta lagu jiro xilliga daadinta, taas oo inta badan ku dhacda cimilada iyo heerkulka isbeddela xilliga guga iyo deyrta.
Tan iyo markii ay yihiin ma aha hypoallergenic , way heli doonaan waxay ubaahantahay cadayasho joogto ah labadii maalmoodba mar ama suurto gal maalin kasta , iyadoo kuxiran inta eygaagu daadinayo. Qubeysku waa lama huraan mar kaliya labadii biloodba mar.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad si joogto ah u jar-jarto ciddiyahaaga yar-yar ee Jarmalka Shepherds-ka ah dhagahooda waaweynna waxay u baahan doonaan in la nadiifiyo ugu yaraan hal mar usbuucii in laga fogeeyo wixii ku soo kordha, wax soo urursiga ama qashinka.
In kasta oo Mini German Shepherds la sheegay inay leeyihiin cimri dheer - oo ah 15 sano - waxay u nuglaan karaan arrimo badan oo caafimaad oo ay ku badan yihiin waalidkood.
Mid ka mid ah cudurada guud ee ku dhaca aafadan ayaa ah sinta dysplasia . Tani waa cudur caan ku ah noocyada Shepherd. Waa goorta kala-goysyada eeyaha eey si hagaagsan u horumarin, taasoo keeneysa isku dhac u dhexeeya kubbadda iyo godka sinta.
Waxa kale oo jira burooyin sababi kara calool xanuun ku dhaca caloosha iyo suuxdin.
Waxaa loo tixgeliyaa moodada, waxaad filan kartaa inaad ku bixiso dinaar quruxsan tarankaan. Eeyaha yaryar ee Shepherd ee Jarmalka ayaa laga yaabaa inay dib kuu celiyaan ugu yaraan $ 950 .
La kulan Amy, yar yar adhijirka Jarmalka ah - Isha sawirka
Korsashada, dhanka kale, way ka raqiisan tahay inaad eygaaga ka iibsato abuure.
Taasi waa haddii aad ka heli karto mid ka mid ah libaaxyadan quruxda badan hoyga.
Samatabbixinta Adhi Jaale yar oo Jarmal ah waxay u badan tahay inay ku kici doonto gobolka $ 300 iyadoo kharashyada daboolaya kharashaadka hoyga.
Tiro ka mid ah kuwa wax yaqaan ayaa ku takhasusay iskutallaabyada Jarmal Shepherd iyo caadi ahaan nooc isku dhafan oo ah Shepherd German Gift oo ka soo jeeda waalid Poodle ayaa noqon doona kan ugu qaalisan uguna dhib badan in la helo.
Isgoysyada Collie weli way noqon doonaan kuwo qiimo leh, laakiin weli waa kuwo la awoodi karo. Qashinka yaryar ee Shepherd Jarmal badanaa wuxuu leeyahay hareeraha lix ilaa sideed ey . Laakiin kahor intaadan iibsan mid ka mid ah eeydan, hubi inaad booqato abuurka.
Muhiim ma aha oo kaliya in la hubiyo heerarka nololeed ee eeyaha waalidka laakiin sidoo kale in laga wada hadlo khadadka dhiigga ee waalidiinta iyo kuwa sameeya.
Haddii shahaadooyinka caafimaadka aan la bixin karin iyo haddii aad aragto wax caddeyn ah oo ku saabsan dysplasia hip-ka waalidka cawrada hubso inaadan iibin eeyga yar, si kasta oo ay u qurux badan tahay!
Guri yaroo Jarmal yar yar
Waa kuwan qaar ka mid ah boggaga si aad uga bilowdo raadinta Mini German Shepherd si aad u wacdo midkaaga:
Adhijirka Jarmalka ee yar-yar si loo korsado
In kasta oo GSD-yada yaryar ay adag tahay in laga helo hoygaaga maxalliga ah, iskuday nasiibkaga mid ka mid ah hay'adaha samatabbixinta ee ku takhasusay eeyaha reer German ee Shepherd iyo noocyadooda isweydaarsiga.
Waxaa jira eeyo badan oo raadinaya guryo weligood ah si ay kaaga caawiyaan raadintaada Adhi yar oo Jarmal ah:
Samatabbixinta Adhijirka Jarmalka ee Westside (Los Angeles, CA)
Badbaadinta Adhijirka Jarmalka ee Bartamaha Texas (Raadinta Springs, TX)
Samatabbixinta eeyaha Jarmalka ee GA (Atlanta, GA)
Cajiib ah waxa iskudhafka kale ee Shepherd Jarmalka ah ayaa jira laakiin sidoo kale cabir ahaan aad udhaxeeya. Waa kuwan canin kale oo mudan in la iska hubiyo :.
Isku darka 'Corgi German Shepherd mix'
Isku darka 'Shepherd Pomeranian mix'
Isku darka adhijirka Jarmalka ah ee Chihuahua
Adhijirka Yaryar ayaa laga yaabaa inuusan ku fadhiyin isla goobta uu ka kooban yahay GSD-ga heerka caadiga ah, laakiin waxay weli u baahan yihiin guri bixiya jacayl badan sida ay ku siiyaan.
Shakhsiyadnimadooda geesinimada leh iyo kuwa daacadda ah, iyo sidoo kale dabeecadooda weyn ee carruurta, waxay u sameysaa xayawaan gurijoog ah oo wanaagsan.
Si wanaagsan ula dhaqan, oo sifiican u ilaali jimicsi ahaan iyo maskax ahaanba, adiga iyo Adhijirkaaga yar Jarmalka ah waxaad wada qaadan doontaan sannado fara badan oo farxad leh!
Maxaad ka dhihi kartaa Adhijaajlayaasha Jarmal ee Yaryar? Haddii aad mid leedahay, sidee ayuu GSD-gaaga u eg yahay? La wadaag sheekadaada adoo ku wada qoraya sanduuqa faallooyinka ee hoose.
Glen of Imaal Terrier ma yahay mid saaxiibtinimo qoys leh ama eey dagaal badan?
maxay ka dhigan tahay marka eygaagu sii xajinayo
Adhijir Jarmal ah oo lagu daray pitbull
Magacyada shaybaarka shukulaatada cute
husky iyo dahab soo ceshanaya qiimaha isku dhafka ah
Adhijirka Australiyaanka ah iyo collie isku darka
kareemka ingiriisiga ee dahabka dib u soo celinta kharashka